प्रेमिका रियाले सुशान्तको मा'निसक स'न्तुलन ठिक न'भएको प्रहरीलाई बयान दिईन् ? पछिल्लो समय स'म्बन्ध ख'राब भएको प्रष्टोक्ती - Filmy News Portal Of Nepal
प्रेमिका रियाले सुशान्तको मा’निसक स’न्तुलन ठिक न’भएको प्रहरीलाई बयान दिईन् ? पछिल्लो समय स’म्बन्ध ख’राब भएको प्रष्टोक्ती
अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको आ’त्मह’त्यापछि प्रहरीले उनकी प्रेमिका रिया चक्रवर्तीसँग ब’यान लिएको छ । करिब ९ घण्टाभन्दा बढी लिइएको ब’यानमा रियाले आफु र सुशान्तसँगको स’म्बन्धको बारेमा कै’यौं खु’लासा गरेकी छन् । सुशान्तले आ’त्मह’त्या अघिको राति रियालाई नै फोन गरेको र रियाले फोन न’उठाएको ब’ताइएकोमा रियाले सो कुरा पुष्टि गरेकी छन् ।
रियाले आफु सु’तिसकेकाले सो फोन उठाउन न’पाएको बयान दिएकी छन् । रियाले सुशान्तसँगको आफ्नो स’म्बन्धका बारेमा बताउदै आफुहरुको भेट २०१२ मा भएको बताएकी छन् । दुवैले यशराजकै ब्यानरमा काम गरिरहेको बताउदै उनले आफु ‘मेरे ड्याडकी मारुती’ फिल्ममा काम गर्दा र सुशान्त ‘शु’द्ध दे’सी रो’मान्स’मा काम गर्दा भेट भएको बताएकी छन् ।
त्यसपछि कैयौं पार्टीहरुमा भेट हुने गरेको र केहि समयपछि आफुहरुले डेट गर्न शुरु गरेको बताएकी छन् । रियाले आफुहरुको सम्बन्धका कारण सुशान्तले कैयौं फिल्म समेत गु’माएको बताउदै स’म्बन्ध पनि त्यति राम्रो नभएको बताएकी छन् । सुशान्तले आफुलाई आफ्ना कुरा सेयर न’गर्ने गरेको र कुनै स’मस्यामा पर्दा एक्लै बस्न रुचाउने गरेको बताएकी छन् ।
रियाले आफुहरुको सम्बन्धका कारण दुवैको क्यरियर समेत प्र’भावित भएको बताएकी छन् । पछिल्लो समय सुशान्त भित्र निकै रि’स भरिएको बताउदै उनले म’नोचिकित्सकसँग सल्लाह लिदैं औषधि समेत खा’इरहेको बताएकी छन् । तर, केहि दिन अगाडीदेखि सुशान्तले औषधि खान छो’डेको, यो’गा र व्या’यामले ठिक हुने बताएको रियाले बताएकी छन् ।
सुशान्तले आफुलाई जुन ६ मा घर छो’डेर जा’न भनेको बताउदै रियाले सुशान्तकै इच्छा अनुसार आफुले घर छो’डेर गएको ब’यान प्रहरीमा दिएकी छन् । आफुलाई केहि दिन अ’लग रहे ठिक हुने ठानेर आफुले सुशान्तलाई छो’डेर गएको बताएकी छन् । त्यसपछि आफुले १४ जुनमा सुशान्तले आ’त्मह’त्या गरेको खबर पाएको बताएकी छन् ।
अघिल्लो रात सुशान्तले आफुलाई फोन गरेको भएपनि आफु सुतेका कारण थाहा नपाएको बयान प्रहरीमा दिएकी छन् । सुशान्त आ’त्मह’त्या प्रकरणमा प्रहरीले छा’नबिन गर्ने क्रममा यशराज ब्यानरलाई समेत छा’नबिनको दा’यरामा राखेको छ । यशराजले सुशान्तसँग गरेको सम्झौताको समेत प्रहरीले अध्ययन गरिरहेको बताएको छ । – एजेन्सी